बिहानै आयो नर्भिक अस्प्तालबाट पारस शाहकाे यस्तो खबर – PathivaraOnline
Home > समाचार > बिहानै आयो नर्भिक अस्प्तालबाट पारस शाहकाे यस्तो खबर
बिहानै आयो नर्भिक अस्प्तालबाट पारस शाहकाे यस्तो खबर
admin January 29, 2019 समाचार 0
हृदयाघात भएका पूर्वयुवराज पारस शाहको मुटुको दुवै ब्लकेज खोलिएको छ। उनको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर तर अझै पनि गम्भीर रहेको छ। ललितपुरको मंगलबजारस्थित कोपितेश्वर महादेव र हिरण्यवर्ण मन्दिरमा पूजाअर्चना गर्दै गर्दा अप्ठ्यारो भएपछि उनलाई सोमबार अपराह्न सवा ४ बजे नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। ‘अस्पतालका मुटु रोग विभाग प्रमुख डाक्टर यादव भट्ट नेतृत्वको टोलीले उनको मुटुको ब्लक खुलाएर स्टेन्ट हालेको छ,’ नर्भिक अस्पतालले भन्यो।
अस्पताल प्रशासनका अनुसार एन्जियोप्लाष्टी गरी मुटुको धमनी खोलेपछि शाहलाई क्याथल्याबबाट सिसियु कक्षमा सारिएको छ। ‘उहाँको स्वास्थ्य स्थिर छ, तर खतरायुक्त छ,’ अस्पताल प्रशासनबाट सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै पूर्वएआइजी राजेन्द्रबहादुर सिंहले भने, ‘उहाँलाई क्याथल्याबबाट सिसियुमा सारिएको छ।’ सिंहका अनुसार एन्जियोप्लाष्टी सम्पन्न भएपछि शाहलाई सिसियुको ‘क्रिटिकल केयरिङ’मा राखिएको छ।
यसअघि मन्दिरमा डेढ घण्टा बिताएका पारसलाई पञ्चकन्याले फूलमालाका स्वागत गरेका थिए। शाह मन्दिर पुग्दा स्वागत गर्न ललितपुरका मेयर चिरिबाबु मर्हजन समेत पुगेका थिए। लामो अन्तरालमा सार्वजनिक स्थलमा देखापरेका पारसलाई हेर्न भीड जम्मा भएको थियो। पारस मन्दिरमा भने हँसिलो मुद्रामा थिए। पारसलाई हेर्न भीड जम्मा भएपछि प्रहरी परिचालन भएको थियो।
बिहानै विराजचोक वरपरबाट आयो यस्तो खबर, बेलुकिबाटै सर्वसाधारण भए स्वतन्त्र!
के छ विवादित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा? जस्ले नेपाल नै रणभूमि बनायो!
एमालेकि कान्छी वडा सचिव बनिन् १९ वर्षीया झरना चौधरी
नयाँ बर्षकै दिन पोखरामा घट्यो यस्तो ठुलो दुर्घटना
एटिएम छैन? अब यो बैंकको एटिएम बुथवाट कार्ड नभएपनि पैसा निकाल्न मिल्छ